Resaky ny mpitsimpona akotry : onjan’ny didy maniraka ny fiandrasana ny tohiny any am-ponja | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : onjan’ny didy maniraka ny fiandrasana ny tohiny any am-ponja
Nitambotsotra Ramatoa Claudine Razaimamonjy teo am-pandrenesana ny fanapahan-kevitry ny mpitsara miandraikitra ny fanadihadiana, izay nanapaka ny figejana azy vonjimaika any am-ponja. Fepetra eo am-piandrasana fandalinana lalina ny fanadihadina. Didy vonjy maika noho ny filàna fahamalinana iarovana ny fikarohana ny marina. Didy izay tsy mitory fahamelohan’ilay olona voampanga. Na izany aza mampivarahontsana.
Sarotra ny ahafantarana ny fiantraikan’izany amin’ny fikorontanan-tsain’ny tsirairay sy momba ny onja aterany mikasika ny toe-batana. Arakaraky ny fiadanana sy ny fahafahana miriaria mahazatra andavan’andro angamba no ahenoana ny vesatry ny fanambarana ny figejana ny tena. Mazàna dia ny olona tsy manana fahasahiranana firy amin’ny fivelomana no mampiseho fahaketrahana be kokoa ka tazana torovana na safotra mihitsy. Mainka moa fa ho an’ny olona toy itony, sady mpanana no tsy fehezina. Tsy vitan’ny maha mpanefoefo azy anefa Madama Claudine fa sady tsy kasihin-dalitra no sarotra ho tratry ny aloka. Raha ny mahazatra eto amin’ny fiarahamonina no jerena, iza moa no hanana fahasahihna hanelingelina na hanakatsakana mpanolotsaina manokan’ny Filohampirenena. Na tsy mahita izay tena tao anatin’ny lohany aza teo am-pandrenesana ilay didy, sarotra ihany no tsy hihevitra fa ny tena nandona mafy ny sainy dia ny fanontaniana mangina, «nahoana re no navelanao hizaka irery fijalina toy izao aho ? Hatraiza ny fanadinoana ireny fiarahana nidinika sy nitetika? Voafafa ve ny fanetren-tena nasehoko na tamin’ny fifanampina na tamin’ny fanatanterahako na ny anjara niandraiketako na ny iraka napetraka tamiko ?»
Maivana izany eo anoloanan’ny fiarovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsy misy sandany ny fitandroana izany ka tsy mamela fandeferana na fanaovana kiantrano an-trano. Tsy misy hirika ho an’ny resaka miankina amin’ny finamanana na noho ny fihavanana. Raha sendra mandrangaranga famindrana ny aretina, na ny Soratra Masina aza dia manoro ny tokony hananana fahasahiana hanapaka ilay rantsam-batana marary. Izany hoe raha maty aho matesa mialoha Rahavana, raha izay no ahafahana anavotan-tena. Angamba tsy misy toerana ahatsiarovana ny maha irery toy ny any am-ponja. Lavitra havana no adinon’andriana. Soa ihany ho an’ny olo-mavesatra ny fisian’ny làlana fanamaivanana ny figadrana : dia ny fitsidihan’aretina hitondra fanavotana amin’ny fandefasana any amin’ny toeram-pitsaboana. Misy aza ny hafetsena amin’ny fisehoana fahaveriverezam-panahy sy saina, mahatonga fanovam-ponenana an’ilay voafonja eny amin’ny kilômetra 18. Malefaka eny ny fiambenana.
Fanatsarana ny fihariana omby: nivory ny sehatra tsy miankina 21/04/2021
“Miatrika Covid”: fiofanana hanatsarana ny fizahantany 21/04/2021